La Niña ifafaale iyo cawaaqibkeeda, maxay tahay? | Saadaasha Shabakadda
Waxay noqoneysaa marba marka ka dambaysa inay Qabaa Gabadha, sida ay warbixin NOAA muujisay, laakiin maxaa dhab ahaan ku dhici doona cimiladan? Cawaaqib noocee ah ayaan la kulmi karnaa bilaha soo socda?
El Niño si tartiib tartiib ah ayuu u daciifinayaa, taas oo runtii ah war wanaagsan marka la fiiriyo inuu ahaa kii ugu darnaa muddooyinkii ugu dambeeyay, laakiin waxaa laga yaabaa inaanu ku faraxsaneyn dhaqsaha. La Niña waxay sababi kartaa masiibooyin dabiici ah oo waaweyn.
1 Waa maxay ifafaalaha La Niña?
2 Cawaaqibta dhacdada La Niña
Arrinta La Niña waa qayb ka mid ah meertada adduunka ee loo yaqaan El Niño-Koonfurta Oscillation (ENSO). Tani waa meerto leh laba weji: midka diiran, oo loo yaqaan El Niño, iyo kan qabow, oo ah waxa, macquul ahaan aan ku yeelan doonno bilaha soo socda, ee loo yaqaan La Niña.
Tani waxay bilaabmaysaa marka ay dabeylaha ganacsigu si xoog leh uga dhacaan dhanka galbeed taasoo keeneysa in heerkulka dhulbaraha uu yaraado.
Markay taasi dhacdo, cawaaqibta ka dhalanaysaa ma aha mid gaabis ah in adduunka oo dhan laga ogaado.
Waxa aan ka filan karno dhacdadan waa kuwa soo socda:
Roobab kusoo kordhay Koonfur Bari Aasiya, qaybo ka mid ah Afrika, Baraasiil iyo Ustaraaliya, halkaas oo daadadku caadi ka noqon doonaan.
Waxaa jiri doona abaaro muhiim ah galbeedka Ameerika, Gacanka Mexico, iyo waqooyi bari Afrika. Heerkulka goobahan ayaa xoogaa ka yaraadaya sidii caadiga ahayd.
Waad akhrisan kartaa warbixinta NOAA Halkan (Ingiriisiga).
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Cawaaqibta dhacdada La Niña
Boggan wuxuu ku qaldan yahay sawirka muujiya inay tahay ifafaalaha gabadha maadaama ay soo saarto abaar ka badan biyo illaa inta aan ka fahmay waxay eegaysaa wikipedia
Kujawaabi samuel giraldo mejia
Maxay tahay inuu qof walba ka ogaado cimilada lamadegaanka